Iitattoos zikaDaisy: ingqokelela yoyilo kunye neentsingiselo | Ukuzoba
Iitattoo zikaDaisy lukhetho olunomdla kakhulu kwabo bafuna ukubamba intyatyambo emzimbeni wabo. Luhlobo lwesityalo esaziwa kwihlabathi liphela, zombini ukumila kwaso nombala waso.
Kungenxa yoko, sithathela ingqalelo ukuthandwa kwayo, sinqume ukunikezela inqaku elitsha kwiTatuantes kwiitattoo ezimnandi. Ngaba ucinga ngokufumana itattoo emnandi? Oko siza kubona kule migca ilandelayo yokubhaliweyo kuya kuba ngumdla kuwe, ke funda ukuze ufumane okungakumbi!
1 Intsingiselo yeetattoos ezinomdla
1.1 Iintsomi kunye neesimboli zedayisy
1.2 Intsingiselo yee daisy ngokombala wazo
2 Izitshixo kunye nemibono yeetattoos ezinomdla
2.1 Ubunyani bokwenyani
2.2 UDaisy onomnqamlezo
2.3 I-Daisy nezinye iintyatyambo
2.4 I tattoo kaDaisy engalweni
2.5 Umfazi onesidanga seentyatyambo
2.6 I-Daisy enokhakhayi
2.7 Intyatyambo elula
2.8 Intyatyambo ngoonobumba
2.9 UDaisy egxalabeni
2.10 Daisy ngentliziyo
3 Iifoto zeDaisy Tattoos
Intsingiselo yeetattoos ezinomdla
Elinye lawona manqaku achaphazeleka kakhulu kwiitattoos zedayiisy yeyayo intlawulo enzulu yokomfuziselo kunye nentsingiselo. Nangona sithetha ngayo kwi elinye inqaku, lixesha elifanelekileyo lokuba ubuyele kumxholo wokuba zithetha ukuthini ii-tattoos.
Iintsomi kunye neesimboli zedayisy
Okokuqala, Kufuneka sazi ukuba le ntyatyambo inxulunyaniswa neenkcubeko ezininzi zamandulo njengeNordic, Celtic okanye iRoma.
Ngokomzekelo, kwiNorse yintyatyambo engcwele kaFreya, isithixokazi sothando nokuchuma, yiyo loo nto esi sityalo sinentsingiselo yobufazi. Kwelinye icala, kumaCelts amandulo kunentsingiselo elusizi, kuba babekholelwa ukuba xa kusweleke umntwana oothixo babenza ama-daisy avela emhlabeni ukukhuthaza abazali.
KumaRoma yayinentsingiselo enxulumene nobunyulu kunye nenguqu. Elinye lamabali alo lithi uVertumnus, uthixo wezityalo, wathandana nenyumfusi entle uBelides, owaguqukela ekubeni liqhina ukuze abaleke kumakhamandela eVertumnus enzima. Yintsomi efana kakhulu naleyo ka-Apollo no Daphne, nabo abatshintsha baba sisityalo (kwimeko yakhe laurel) ukubaleka abalekelwa nguye.
Ngendlela, isithethe sokuqothula iintyatyambo zedayisy Ukubona ukuba umntu uyasithanda na okanye akanayo ingcambu kwimathematics, kuba ii-daisy zalandela iphethini ye-Fibonacci kwiifalali zazo, ke abanye banenani elilinganayo kwaye abanye banenombolo engaqhelekanga, kuxhomekeke ekubeni sikhetha yiphi. Kungenxa yoko le nto ii-daisy ziye zaba luphawu lothando.
Ekugqibeleni, intyatyambo emnandi ibonisa ubumsulwa nobunyulu kubuKristu, kunokwenzeka ngenxa yomxube wazo zonke iintsomi zobuhedeni esikuxelele zona.
Ngamafutshane, kwaye ngenxa yazo zonke ezi nkolelo, Iitattoo zikaDaisy ngokubanzi zifanekisela ubuhle, uthando, ulutsha, ulonwabo kunye nobufazi.
Intsingiselo yee daisy ngokombala wazo
Ngoku, ukwazi intsingiselo yokwenyani yeetattoos kuluncedo kakhulu nikela ingqalelo kumbala wayo, kuba nganye inesimboli eyahlukileyo ehambelana nayo:
Iidayisi ezibomvu: Amandla kunye nokuphicotha.
Iidayisi ezimthubi: Uvuyo kunye nobukrelekrele.
Iidayisi eziblueIimvakalelo kunye novakalelo.
Iidayisi ezimhlophe: Ubumsulwa nobunyulu.
Izitshixo kunye nemibono yeetattoos ezinomdla
Elinye lamaqhosha ee-daisy tattoos-njengaleyo yabanye Iitattoo zeentyatyambo- yeyakhe iyantlukwano kunye nezinto ezahlukeneyo ezinokubakho xa kusenziwa uyilo. Sinokwenza umvambo wentyatyambo emnandi, isityalo esipheleleyo okanye sidibanise nolunye uhlobo lwento. Kwigalari ye tattoo emnandi ehamba neli nqaku unokufumana izimvo zetattoo yakho elandelayo kwaye ngoku siza kukunika izimvo ezimbalwa.
Akuthandabuzeki Olunye loyilo oluxatyisiweyo lwee-tattoos ze-daisy kunokwenzeka ukuba yenye yezi ntyatyambo kubo bonke ubuqaqawuli bayoOko kukuthi, kwisitayile esisiso. Unokukhetha umbala okanye umbala omnyama nomhlophe, into ebalulekileyo kukuba iinkcukacha zicingelwa ubuncinci, umzekelo, ngezithunzi ezenziwe kakuhle ezinika ubunzulu kwisityalo.
Ukuba ufuna enye into yokomoya kwaye elula unako khetha umvambo odibanisa le ntyatyambo kunye nophawu lwenkolo. Ukuba uyenza ngomnqamlezo, njengaleyo ifoto, umzekelo, uya kube uhambisa isimboli sobuKristu esihambelana ne-daisy (ubumsulwa kunye nobunyulu).
I-Daisy nezinye iintyatyambo
IiDaisy zingasebenza zodwa, kodwa zikhatshwa nazo ziyamangalisa. Ukongeza ekuthumeleni uninzi lweentsingiselo ezahlukeneyo (ngokweentyatyambo nganye), isitayile esisiso siyacetyiswa kwaye, ukuba ukhetha umbala, umntu owaziyo ukuphatha kakuhle okanye kunokuba sisiphithiphithi.
I tattoo kaDaisy engalweni
Ngenxa yendlela emile ngayo le ntyatyambo, iqhekeza lengalo lilungile. Khetha uyilo olukhulu, njengaleyo ifotweyo, igcwele iinkcukacha kwaye une-twist yobuqu (I-daisy ijonge ezantsi kwaye ibomvu) ukuyenza i-tattoo eyahlukileyo neyantlandlolo.
Umfazi onesidanga seentyatyambo
Kulabo bafuna uyilo olucingayo ngakumbi, Iidattoos ezinamandla zinokudityaniswa nezinye izintoUmzekelo, umfazi. Impumelelo ye tattoo kumfanekiso kukuba isitayile sipholile kakhulu kwaye siyahambelana nomxholo we tattoo, kuba iyinto yesiko, kunye nokuchukumisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka weentyatyambo.
Kwaye siyaqhubeka noyilo oludibeneyo, kule meko, Ikhatshwa lukakayi kunye nerose, ezimbini zezona zinto zixhaphakileyo kwiitattoos. Xa kudityaniswe nemargarita, umnxeba ongaphezulu kunikwa isiqwenga. Kukho ezinye iindlela eziqala kumxholo omnye, umzekelo, ukuhombisa ukakayi kwisitayile saseMexico.
Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha iiklasikhi zisebenza kakuhle, kwaye kuthathelwa ingqalelo intsingiselo yeentyatyambo, uyilo olulula, ngombala omnyama nomhlophe, lunokubonisa ukuthobeka kunye nokuqonda. Kwaye kubonakala ngathi kuhle kwiindawo ezincinci ezinjengesihlahla okanye iqatha.
Olunye ukhetho olunomdla kakhulu kwiitattoos ezinobuhle zi Thatha ithuba lokuma kwesitayile ukukhapha intyatyambo ngoonobumba abathile okanye ibinzana elinentsingiselo ekhethekileyo. Isiphumo ngumvambo obuthathaka ojongeka umhle phantse naphina.
Ungacinga njani Iitattoo zeentyatyambo egxeni ziyindawo efanelekileyo. Ubume bentyatyambo bufezekile kwaye igxalaba liya kuyinika ubunzulu obongeziweyo, kodwa linokudityaniswa nezinye izinto (iintyatyambo, iiferns) ukwakha iqhekeza elikhulu nelinomtsalane.
Ekugqibeleni, I-daisy ekhatshwa yintliziyo embindini ngomnye umzekelo wesimboli sothando sale ntyatyambo. Khetha umbala ngaphandle komhlophe kwiipalali, njengefoto, ukunika intsingiselo yentsingiselo yentsusa.
Siyathemba ukuba ulonwabele eli nqaku malunga nomfuziselo we tattoo kunye nemibono. Khawusixelele, unayo itattoo efanayo? Ngaba ucinga ukuba silibele ukudlulisa nayiphi na intsingiselo? Sazise kumagqabantshintshi!
Iifoto zeDaisy Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Iitattoos zikaDaisy: ingqokelela yoyilo kunye neentsingiselo